‘प्रचण्डजीलाई भनेर बनाएको, बाबुरामजी आउनुभयो’
Sat, Aug 24, 2019 | 10:49:34 NST
08:30 AM (5years ago )
Total Views: 8.7 K
दलहरुले भने अनुसार माघ ८ गते संविधान आउन अबका केही दिनमा महत्वपूर्ण काम भैसक्नुपर्छ । संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले भदौ तेस्रो हप्ताभित्र विवादित विषयमा सहमति जुटाउनुपर्ने म्यान्डेट पाएको छ । आफ्नो म्यान्डेट अनुसार सहमति जुटाउन समितिले छलफललाई तिव्रता पनि दिएको छ । तर शासकीय स्वरुप, राज्य पुनर्संरचना, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीका जटिल विषय जस्ताको तस्तै छन् । यस्तो बेला छलफललाई तिव्रता दिनुपर्ने बेला दलहरु उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको विवादमा अल्झिएका छन् ।
एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसवादी दलले समिति गठन नहुँदासम्म काम अघि बढ्न नसक्ने बताएका छन् । कांग्रेस र एमाले यसको विपक्षमा भएपनि पछिल्ला केही छलफलमा समिति गठनबारे लचक भएका छन् । तर समिति कहिलेसम्म गठन हुन्छ भन्ने अझै अन्योल छ । उच्चस्तरीय समिति गठनको विवादले संविधान निर्माण प्रकृयामा पनि असर परेको छ ।
दलहरुबीच सहमति कहिलेसम्म हुन्छ ? अहिलेको कामले माघमा संविधान आउँछ भन्ने आधार के ? यही विषयमा उज्यालो अनलाइनका लागि सहकर्मी मिलन तिमिल्सिनाले दलहरुसँगको छलफलमा सक्रिय सहभागी हुँदै आएका कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासँग कुराकानी गर्नुभएको छ :
संविधान निर्माणमा जुट्नुपर्ने यो बेला तपाईंहरु उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा अल्झिनुभयो नि ?
संविधान बनाउने कुरामा हामी कतै पनि अलमलमा छैनौं । संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाले गठन गरेका ५ वटा समिति छन् । जसमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले अहिले धमाधम आफ्नो काम गरिरहेको छ ।
तपाईंले भन्न खोज्नुभएको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवैधानिक समिति, जसले काम नसक्दासम्म तपाईं नेतृत्वको समितिले काम पाउँदैन । तर अर्को उच्चस्तरीय समिति गठन नहुँदासम्म त भट्टराई नेतृत्वको समितिले पनि काम सहज रुपमा गर्न नसक्ने भयो नि ?
यो उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति भनेर नै बाहिर गलत व्याख्या भयो । चुनावपछि एनेकपा माओवादीले उठाएका माग सम्बोधन गर्नको लागि अरु तीनवटा बुँदासँगै शान्ति प्रकृयाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न र संविधान निर्माणमा सघाउन राजनीतिक समिति गठन गर्ने र त्यसमा संविधानसभामा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु बस्ने भन्यौं । उच्चस्तरीय पनि भनेनौं । को को बस्ने पनि भनेनौं । यस अनुसार हामीले त्यो समिति गठनको आधा काम गरिसक्यौं । अर्थात संवैधानिक संवाद तथा सहमति समिति बनिसकेको छ र त्यसले काम पनि गरिरहेको छ ।
त्यसो भए प्रचण्डले भन्नुभएको जस्तो समिति गठनमा दलहरुबीच सहमति भएको होइन ?
हामीले प्रचण्ड जीलाई भनिसकेका छौं, हामी जे सहमति गर्छौं त्यसबाट कहिल्यैपनि पछाडि हट्दैनौं । कांग्रेस, एमाले पछाडि हट्यो भन्ने बेकारको कुरा हो । चारबुँदे सहमतिमध्ये तीनवटा बुँदा त लागू नै भैसकेको छ । चौथो एउटा बुँदा पनि आधा लागू भैसकेको छ । हामीले त्यत्रो संवैधानिक संवाद तथा सहमति समिति बनायौं । प्रचण्ड जी आउनुहुन्छ भनेर भनेका थियौं, बाबुराम जी आउनुभयो । त्यसलाई पनि हामीले सहज ढंगले स्वीकार गर्यौं । अब बाँकी रह्यो शान्ति प्रकृयाको इस्यू । त्यसको लागि पनि समिति बनाउन हामी तयार छौं । शान्ति प्रकृयाको इस्यू बाँकी छ । यसमा पनि हामी तपाईंलाई नै भन्छौं, तपाईं बस्नुहुन्छ कि को बस्छ भनेर प्रचण्डलाई भनेकै छौं ।
त्यसो भए त्यो समिति कहिलेसम्म गठन हुन्छ त ?
भदौ १३ भित्र भैसक्नुपर्ने थियो । फेरि खै किन हुन सकेन ।
छलफलमा तपाईं पनि हुनुहुन्थ्यो, किन हुन सकेन त ?
प्रचण्ड जी साथीहरुसँग सल्लाह गर्छु भनेर जानुभएको, उहाँलाई पनि समस्या होला । अब दुई चार दिनभित्र टुंगिन्छ ।
समिति गठन नहुँदासम्म त संविधान निर्माणको कामलाई पनि अप्ठेरो पर्ने भयो नि ?
संविधान निर्माणको काम भनेको संविधानसभा र संविधान समितिका समितिहरुमा छ । उहाँहरुले संविधानसभा अवरुद्ध गर्नुभएको होइन । त्यसैले केही फरक पर्दैन ।
तर संवैधानिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले पनि उच्चस्तरीय समिति गठन नहुँदासम्म संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन समस्या पर्ने बताउनुभएको छ । मलाई त त्यस्तो लाग्दैन । समिति गठनको कुरा बेग्लै हो । संविधान निर्माणको काम बेग्लै हो । बाबुराम जीले नेतृत्व गर्नुभएको समितिलाई कसले अवरोध गरेको छ र ?
तपाईं समिति गठन पनि हुन्छ, गठन नहुँदैमा संविधान निर्माणमा असर पर्दैन पनि भन्नुहुन्छ । एमाओवादी अब समिति गठन नहुँदासम्म काम अगाडि बढ्न सक्दैन भन्छ । यस्तो आपसी अविश्वासले तपाईंहरुले बेलैमा संविधान बनाउनुहुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
मलाई त विश्वास छ, हामी कार्यतालिका अनुसार नै काम गर्न सक्छौं र माघ ८ गते नै संविधान जारी गर्छौं । बाबुराम जी को समितिले काम सक्ने बित्तिकै म नेतृत्व रहेको मस्यौदा समितिले समयमै काम थाल्ने भनेर हामी तयारी अवस्थामा छौं । भदौ मसान्तसम्म हामीलाई संविधानसभाले प्रस्ताव पठाउन चाहिँ सक्नुपर्यो । त्यसपछि हामीले सातदेखि १० दिनभित्र मस्यौदालाई पूर्णता दिएर फेरि संविधानसभामा पठाउन सक्छौं र असोज मसान्तसम्ममा राजपत्रमा प्रकाशित हुने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी त एकदम तयारीमा बसेका छौं ।
तपाईंहरुले त तयारी गरेको भन्नुहुन्छ । तर नागरिक अझै ढुक्क छैनन् । एउटा कुरा नढाँटी भन्दिनुहोस् न माघ ८ गते साँच्चै संविधान बन्छ भनेर तपाईंको मनले भन्छ ?
अब मैले सोचेजस्तो हिँडियो भने त बन्छ ।
तर सबै तपाईंजस्तै सोच्ने त हुन्नन् नि ?
मैले अहिलेसम्म बुझ्दा, सबै पार्टीका नेताहरु, अझ माओवादी नेताहरुको समेत भावना बुझ्दा मलाई लाग्छ बन्छ । माघमा बन्ने संविधान टरेको छैन । रात रह्यो अग्राख पलायो भने त मेरो भन्नु केही छैन, सोचौंला फेरि त्यो बेला । तर संविधान बन्छ भन्नेमा म चाहिँ ढुक्क छु । संविधानसभाले बनाएको जुन कार्यतालिका छ, त्यो कार्यतालिका अनुसार माघ ८ गतेमा संविधान जारी गर्न सक्ने अवस्था छ । हेरौं हाम्रो प्रयास कति सफल हुन्छ, हुँदैन । भोलिको दिनले बताउँछ ।